Ny Première Agence de Microfinance
Manolotra vahaolana ara-bola izahay mba hahafahan’ireo mpanjifa rehetra manatanteraka sy mitrandraka ny tetikasany mifanaraka amin’ny filany.
Ny « Première Agence de Microfinance (PAMF) » Madagasikara dia orinasa izay eo ambany fiahian’ny « Agence Aga Khan pour la Microfinance (AKAM) ». Mirehareha izahay amin’ireo anjara biriky nentinay izay manana fiantraikany maneran-tany, noho ny asan’ny « Réseau Aga Khan de développement(AKDN) ». Tanjonay ny hanome fahafahana ireo mpanjifa hanatanteraka ny tetikasany araka izay mampety azy.
Manana filamatra izay mampiavaka azy ny « Réseau Aga Khan de Développement (AKDN) » ary maniry ny hamongotra ny fahantrana maneran-tany amin’ny alàlan’ny fanatsarana ny fari-piainan’ireo olona sahirana sy marefo ara-pivelomana. Ny « Agence Aga Khan pour la Microfinance (AKAM) » dia iray amin’ireo sampan-draharaha ao anatin’ny tambazotra AKDN izay mikendry hatrany ny fanatanterahana izany fanamby izany. Tambazotra banky lehibe sy toerana fampindramam-bola madinika maro no napetraka manerana ny kaontinanta efatra sy amin’ireo firenena 10, koa isan’izany ny « Première Agence de Microfinance » (PAMF) Madagasikara.
Fantaro ireo tolotra vaovao misy amin’ny alalan’ny finday
Laham-pahamehana ho anay ianao mpanjifa. Fantaro ary ireo mpanjifa izay nahazo tombontsoa tamin’ny fiaraha-miasa tamin’ny PAMF
FAMPINDRAMAM-BOLA HO AMIN’NY FANANGONAM-BOKATRA
«Mariette Razanamandroso no anarako, manambady ary manan-janaka 3 mianadahy. Mpanangom-bary ao Befandriana ny asa ataoko. Nanao findramam-bola tao amin’ny Première Agence de Microfinance (PAMF) ny tenako mba nahafahana nanomboka ny asa tamin’ny voalohany. Vaovao tamiko ary nanahirana ahy izany hindram-bola amin’ny ivon-toerana fampindramam-bola izany ary tsy nahafantatra hoe aiza no aleha. Ireo olona manodidina ahy no nanoro ahy ny fisian’ny PAMF ka rehefa nanatona tany dia nahazo ny fampindramam-bola voalohany izay mitentina MGA 400 000. Nampiasaina io vola io nividianana enta-madinika ary namidy izany aveo. Faha 15n’ny findramam-bola sompitra iombonana (GCV) nataoko izao ary manana 1000 gony amin’ny paddy aho ankehitriny. Hatramin’ny niarahako niasa tamin’ny PAMF dia niroborobo ny asa izay nataoko ary niakatra ny vola azoko tanatin’ny taona ray. Afaka nanangana trano mihitsy aza ny tenako any Ambalavao ary tanjona ny hampitombo avo 3 heny ny vokatra ho angonina.»
FAMPINDRAMAM-BOLA HO AN’NY TSENA
« Yvonne Razafindratoandro no anarako, renim-pianakaviana ary manan-janaka 2. Ao Bealanana no mipetraka ary mivarotra enta-madinika. MGA 900 000 ny vola nindramiko voalohany tao amin’ny Première Agence de Microfinance ary nikasa ny hampivelatra ny tetikasako ary naniry ny hanangona vokatra betsaka kokoa mialohan’ny fotoana hiavian’ny orana. Nahafahako nanangona vokatra mialoha ny fotoana mba hahafahako mivarotra izany amin’ny fotoana mahamety azy. Nitombo teo amin’ny 70 % araka izay ny vola miditra tamin’ny ankohonako. Maniry ny hividy camion aho ao aoriana kely ao mba hahafahako mitatitra ireo vokatra. »
FAMPINDRAM-BOLA HO AN’NY FIOMPIANA
« Joseph Randrianjara, manambady ary manan-janaka 2. Mpiompy akoho, omby vavy be ronono ary kisoa ao Befandriana Avaratra ny tenako. Nikasa hindram-bola tamin’ny ivon-toerana findramama-bola aho satria nanana fikasana hampiroborobo ny asako sy hampivelatra ny seham-pihariako. Ny PAMF no nosafidiako satria izy no akaiky ahy indrindra ka nahazo famatsiam-bola nitentina MGA 4 000 000 aho tamin’izany. Nampiasaiko mba hanitarako ny fiompiana izay efa nataoko. Amin’izao fotoana izao dia afaka namorona asa ho an’olona vitsivitsy izay manampy ahy ami’nny fikarakarana ny fiompiana izay ataoko izany. Nitombo 67 % araka izany ny vola miditra ho an’ny ankohonako ary afaka nividy tany sy nampiditra ireny tolotra ahazoana manaraka ny vaovao eran’izao tontolo izao ireny aho. Ohatra tsara ho an’ny olona manodidina ahy ireny vokatra tsra tamin’ny findramam-bola nataoko ireny dia nanampy ny manodidina ka nanosika azy ireo hanokatra tsena izay manodina ny vokatra, na ihany koa manodina ny vokatra ho azo ampiasaina indray. Rehefa tafaverina soa aman-tsara ny vola izay nindramiko dia mikasa hividy omby vavy be ronona fanampiny sy kisoa faka taranaka ny tenako.»
NO MAMPIAVAKA ANAY?
Toeram-piasana manana ny maha izy azy ny PAMF ka sarotiny amin’ny fahalalahana sy fivelaran’ny mpiasa tsirairay ara-kasa. Isan’ny mampiroborobo ny orinasa ny fanana mpiara-miasa mazoto. Noho izany indrindra no nametrahana ny politika mijery ny mahaolona izay mipetraka amin’ny fitoviana, fanazarana ary fampazotoana
MISY IZAHAY SATRIA TE HANAMPY ANAREO HANATRATRA
NY TANJONAO SY NY TOSIKA ARA-BOLA IZAY ILAINAO
Tetikasa novatsiana vola
+ 400 000 ny mpanjifa
+ 1 143 ny asa noforonina
+ 250 000 ny Tetikasa novatsiana